Salaamanews » Baarlamaanka oo dhisay guddiyada la shaqeynaya xukuumadda
Home » Warar Baarlamaanka oo dhisay guddiyada la shaqeynaya xukuumadda Print - Daabace: SalaamaNews - Jan 2nd, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Wadamada Islaamka oo ku baaqay qorshe lagu taageerayo SoomaaliyaMaxkamadda Boosaaso oo xukunno fulisayNin Soomaali mareykan ah oo lagu helay inuu dhallinyaro u qoray Al-shabaabMiisaaniyadda 2013 oo cod aqlabiyad leh lagu ansixiyaySouth Africa oo ku hanjabtay in tallaabo adag ay ka qaadeyso qaadka
Baarlamaanku wuxuu dhisay 15-guddi, oo la sheegay inay la shaqeyn doonaan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, guddiyada la dhisay ayaa mid mid u la shaqeyn doona wasaaradaha 10-ka ah ee xukuumadda Soomaaliya.
Sidookale guddiyadu waxaa ku jira shan guddi oo iyana la sheegay inay si gaar ah u la shaqen doonaan wasaaradda adeegga bulshada oo kulmisa wasaarado badan oo ay kamid yihiin Cayaaraha, Waxbarashada, Caafimaadka iyo kuwa kale.
Dhanka kale mudanayasha baarlamaanka qaarkood ayaa dhaliilay guddiyada la dhisay, iyagoo eedeyn dusha kaga tuuray guddigii ka soo tala bixinta guddiyada baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamuud Axmed Kula lihi, oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ee ka soo horjeestay guddiyada baarlamaanka ayaa sheegay inuu codsaday guddiga arrimaha dibadda oo uu sheegay in 20-sano uu khibrad u heysto laakiin wuxuu xusay inaan magaciisa lagu soo darin.
“Waxaan 20-sano la shaqeynayay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, marka waxaan codsaday in leygu daro guddiga arriamaha dibadda, magaceygana laguma soo darin” ayuu yiri xildhibaan Kulalihi.
Waloow eedaasi ay jirto hadana waxaa maanta si rasmi ah loo dhisay guddiyadii baarlamaanka oo la sheegay inay la shaqeyn doonaan xukuumadda Soomaaliya.
Tags: warar « Qoraalkii HoreWafdi uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhiga oo gaaray Baydhabo	Qoraalka Xiga »Farshaxanka oo Muqdisho dib ugu soo laabanaya xilli uu amaankuna soo hagaaggayo	Halkan Hoose ku Jawaab